Taliyaha Ciidanka Taraafikada Soomaaliyeed Cali Xirsi Barre ( Cali Gaab ) oo Maanta lagu dhaawacay isgoyska KM4 ee Magaalada Muqdisho.
Dec 5, 2012 (QOL) Waxaa maanta dhaawac loo gaystay Taliyaha Ciidanka Taraafikada ah ee Soomaaliya Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) xili uu rabay inuu Isbaaro kaqaado Isgoyska KM4 ee Magaalada Muqdisho, illaa iyo hada si cad looma garanayo sababta keentay dhaawaca Taliyaha maadaama aysan jirin wax weerar ah oo lagu soo qaaday Taliyaha, hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in Taliye Cali Gaab uu ku dhaawacmay xabad ku fakatay (qaraxday).
Dhaawaca taliyaha ayaa lasheegayaa in loola cararay Xarun Caafimaad oo lagu magacaabo Daaru-shifa halkaas oo lagu dabiibayo Caafimaadkiisa, waxaana la filayaa inay Masuuliyiinta Soomaaliya ka warbixin doonaan waxa sababay dhaawaca maanta soo gaadhay Madaxa Ciidanka Taraafikada Soomaaliyeed iyo waliba sida ay xaaladiisa Caafimaad tahay.
Isku soo wada uruuriyoo dadka aqoonta u leh Taliye Cali Gaab ayaa ku sheega nin aad hawlkar u ah isla markaasna marwalba jecel inuu wax badan kaqabto Shaqada u taala Ciidanka Taraafikada loo yaqaano, taas oo uu maanta ku dhaawacmay isagoo ku hawlaan.
Waxii kasoo kordha xaalada Taliyahaas dib ayaan kasoo gudbin doonaa hadii alle idmo.
Noor Mohamed Qorahay Media qorahay99@yahoo.com �